मनमोहन अधिकारीकोे पालामा १ सय रुपैयाबाट शुरु भएको बृद्धभत्ता चार हजार पुग्यो - Arthapage
मनमोहन अधिकारीकोे पालामा १ सय रुपैयाबाट शुरु भएको बृद्धभत्ता चार हजार पुग्यो
प्रकाशित मितिः १५ जेष्ठ २०७८, शनिबार १७:५८ May 29, 2021
तत्कालीन मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको एकल कम्युनिस्ट नेतृत्वको पहिलो सरकारले सुरु गरेको वृद्धभत्ता अब मासिक चार हजार पुगेको छ । एमाले सरकारका तत्कालिन अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले २०५१ ५२ को बजेट भाषणमा पहिलोपटक नेपालमा वृद्धभत्ताको नीति सुरु गरेका थिए ।
शुरूमा वृद्धभत्ता पाउने उमेर ७५ तोकिएको थियो भने मासिक भत्ता जम्मा एक सय रुपैयाँ पाउने व्यवस्था सुरु गरिएको थियो । सुरुमा नेपाली कांग्रेसल यो भत्ताको बिरोध गरेपनि आर्थिक वर्ष २०५६/५७ कांग्रेसको सरकारले १०० रुपैयाँको वृद्धभत्तालाई १५० रुपैयाँ पुर्‍याएको थियो। तत्कालीन अर्थमन्त्री महेश आचार्यले वृद्धभत्ता बढाएका थिए।
फेरि ०६१/०६२ मा भरतमोहन अधिकारी अर्थमन्त्री भएको बेला १७५ पुगेको थियो । २०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि २०६४ भएको आम निर्वाचनपछि पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा बनेको सरकारकाअर्थमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले वृद्धभत्तालाई १७५ रुपैयाँबाट एकैपटक ५ सय रुपैयाँ पुर्‍याएका थिए ।
२०७२ सालमा नेपाली कांग्रेस नेतृत्वकै सरकारले ५ सय रुपैयाँबाट १००० रुपैयाँ पुर्‍याएको थियो। अर्थमन्त्री डा. रामशरण महत थिए । यसअघि अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को बजेटबाट डा. युवराज खतिवडाले एक हजारले बढाएर मासिक तीन हजार बनाएका थिए। यस्तै, विष्णु पौडेलले पनि आव २०७४/७५ को आफ्नो पहिलो बजेटबाट यो भत्ता एक हजार रुपैयाँले नै बढाएर मासिक दुई हजार पुर्‍याएका थिए।
करिब २१ बर्षपछि सरकारले वृद्धभत्ता ४ हजार पुर्‍याएको छ। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सामाजिक सुरक्षा भत्तामा ३३ प्रतिशतले वृद्धिगरी ४ हजार पुर्‍याएको जानकारी दिएका हुन् । २०५१मा सुरु गरिएको उमेर हद ७५ वर्षबाट क्रमशः ७०, ६५ हुँदै ६० वर्षसम्म आइपुगेको छ । शुरूमा वृद्धभत्ता पाउने उमेर ७५ तोकिएको थियो ।
प्रकाशित मितिः १५ जेष्ठ २०७८, शनिबार १७:५८ |
Prev२०५१ सालमा एमालेले ल्याएको लोकप्रिय बजेट कस्तो थियो ? हेर्नुहोस् पूर्णपाठ
Nextकोरोना प्रभावित नागरिकलाई सरकारले बजेट मार्फत दिएका राहत यस्ता छन्